काठमाण्डौ महानगरको २५ हजार मत गन्दा बालेन शाहलाई १० हजारभन्दा धेरै !
काठमाण्डौ : काठमाण्डौ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको अग्रता कायमै छ । ताजा मत परिणाम अनुसार महानरको २५ हजार ५२ मत गनिसक्दा शाहले १० हजार मत कटाउनु भएको छ ।
उहाँले १० हजार २ सय ४१ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
एमालेका मेयर उम्मेदरवार केशव स्थापितले अहिलेसम्म ५ हजार ४ सय ५३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ४ हजार ७ सय ४२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
थप समाचार, भरतपुर महानगरपालिकामा जारी मतगणनामा पाँचदलीय गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेनु दाहाल र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजय सुवेदीबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ ।
दुई उम्मेदवारको मत अघि–पछि हुँदै वडा न. ४ को गणना सकिँदा दाहाल ३० मतले अगाडि हुनुहुन्छ । दाहालले पाँच हजार ७१८ मतका साथ अग्रता लिनुभएको छ भने सुवेदीले पाँच हजार ६८८ का साथ पछ्याइरहनुभएको छ ।
स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार रहनुभएका जगन्नाथ पौडेलले दुई हजार ७८८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले छ हजार ९८५ र राप्रपाका हिमला गुरुङले चार हजार ६४५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
आज बिहान सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो नतिजाअनुसार वडा नं ४ को गणना सम्पन्न हुँदा कांग्रेसका अर्पण पोखरेल दुई हजार ५३० मतका साथ विजयी हुनुभएको छ । एमालेका उम्मेदवार भानुभक्त सापकोटाले एक हजार ६३३ र राप्रपाका
चर्तुभुज कँडेलले ८८० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । वडा नं ५ को मतगणना थालिएको छ । भरतपुरमा एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेको छ । यस्तै जिल्लाको माडी र इच्छाकामनाबाहेकका चार पालिकामा पाँचदलीय गठबन्धनको अग्रता रहेको छ ।
२०७९ जेष्ठ ३, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 118 Views
बधाई ! रबि लामिछानेले खोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
प्रधानमन्त्री देउवा चढेको हेलिकप्टर आकाशमै इन्धन सकिएपछि भैरहवामा अवतरण !
चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने चुनाव लड्दै, कुन क्षेत्रबाट दिँदैछन् उम्मेदवारी ?